Farta Shiinaha Shiinaha Oven Mitts Gacmo Guluhu Gacmo Weyn, Silicone kulul galoofyada cagaaran Soosaaraha iyo Alaab-qeybiye | Jingqi
FDA + Resistant Heat
10 * 11 * 9cm
Eyga madaxa ee qaabeeya galoofiska silikoon Cuntada dhejiska gacmo gashiga Silicone Heat Resistant gacanta
Cuisinart Heat Resistant Silicone Gacmo gashi ayaa ku siinaya ilaalin aad ubaahantahay markaad wax dubayso, dubista, iyo cunida sigaarka. Waxay ku fiican yihiin in cuntada toos loogu dhiibo karinta sababta oo ah dufannada iyo suugaanta dhejiska ahi kuma dhegi doonaan - way fududahay inaad si fudud u nadiifiso. Ku hay meel diyaarsanaan leh jikada jikada si aad wax uga qabato qalabka wax lagu kariyo kulul xagga kariyaha ama foornada.
Magaca badeecada Eyga madaxa ee qaabeeya galoofiska silikoon Cuntada dhejiska gacmo gashiga Silicone Heat Resistant gacanta
Qaab Madaxa eyga
Isticmaalka Gacmo gashiga gacmaha kululeeya
cabir ; 10 * 11 * 9cm
culeys 55g / pc
Xidhmada 1pc / bac boorso
galoofyada wax lagu karsado ee silicone
Koobka Bakteeriyada Silicone Cupcake Saddex Dimensio ...
Cabbirka Dhexdhexaadka Cuntada Heerka Salibida Cuntada ah ...
Naqshadeynta moodada dharka barafka leh FDA silicone ice mo ...
3 qaabab kala duwan Cunto karinta Fashiinka Silicone ...